Princess My Chubby - Akhriso Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga iyo Light Novel Online oo bilaash ah
Princess My Chubby Celceliska 3.3 / 5 ka mid ah 3
N / A, waxay leedahay 5K views
Ingiriis- Halyeeygii qarniga 21aad Dhakhtar iyo Gacan ku dhiigle, Si lama filaan ah waxay ugu guureen Miss Saddexaad ee Deganaanshaha Duke, laakiin waxay noqdeen foolxumo foolxun oo curyaan ah? Iyada oo aan laga wada warqabin, marka indhaheeda qabow ay furmaan, toban kun oo garaacis ah ayaa iyada isu dhiibaya. Waxay ku talaabsataa naagta sharka leh iyo ninka xun. Waxay isu beddeshaa soo-saare heer sare ah waxayna la dagaallantaa qof kasta oo iyada ka socda ha ahaadaan ilaah ama shaydaan! Maaddaama ay ku raaxeysaneyso la macaamilidda bahallada iyo miisaanka oo yaraanaya, Ma aysan ogeyn inay la jaha wareertay adeer boqortooyo oo laba waji leh: “Xaaska Imperial waa u qurux badan tahay cirfiidnimada, ragga waa inaad si dhaw ula socotaan Mid kasta oo iyada ku yimaada waa in la dilaa! "Ibad baadi! Ma codsan karaa in aan soo celiyo ninkaygan qurxoon laakiin indhoolayaasha ah ee isku dhegan?
Cutubka 32 April 10, 2021
Cutubka 31 April 6, 2021
cutubka 25 March 28, 2021
cutubka 24 March 28, 2021
Cutubka 22 March 27, 2021
Cutubka 21 March 17, 2021
Cutubka 19 March 5, 2021
Cutubka 18 March 5, 2021
Cutubka 17 March 5, 2021
Cutubka 16 March 5, 2021
Cutubka 15 March 5, 2021
Cutubka 14 March 5, 2021
Cutubka 13 March 5, 2021
Cutubka 12 March 5, 2021
Cutubka 11 March 5, 2021
Cutubka 10 March 5, 2021
Cutubka 9 March 5, 2021
Cutubka 8 March 5, 2021
Cutubka 7 March 5, 2021
Cutubka 6 March 5, 2021
Cutubka 5 February 4, 2021
Cutubka 4 February 4, 2021
Cutubka 3 February 4, 2021
Cutubka 2 February 4, 2021
Cutubka 0.5 February 4, 2021
Cutubka 0 September 19, 2020
Qandaraaska lala galo Dembi daahir ah
Jacaylka Dunida Khayaaliga ah
Anigu Waxaan Ahay XXX Markii Aan Idol